Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 nevana 2 ndotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 28 . . . | Kwayedza
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 nevana 2 ndotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 28 . . .
22 Apr, 2016 - 00:04	 2016-04-22T00:30:06+00:00 2016-04-22T00:00:45+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 3, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ari positive seni. Ngaave anoshanda asina mukadzi, anonamata asingapute fodya kana kunwa doro. Ndinoda ane makore 40 kusvika 45. Andifarira anotumira sms kana kufona pa0774 868 819.
Makadii? Ndinonyorera asi shambadzo yangu haibuditswe. Ndiri murume ane makore makumi matatu nemwana mumwe. Ndiri kutsvaga mukadzi anoda zvemba ane makore makumi maviri nemasere zvichidzika. Ngaave ane mwana mumwe kana vaviri. Andifarira ngaandibate pa0718 386 957 asi vanoda zvekutamba kwete.
Makadii veKwayedza? Ndakambonyorera kuchirongwa chino asi handina kuwana ari pachokwadi. Ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndinodawo musikana ane makore 20 kusvika 18 asina chirwere seni. Vanoda zvekutamba musafone zvenyu, ndoshanda basa rekutengesa muchitoro. Andifarira ngaandibate pa0774 959 392.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 nevana 2 ndotsvagawo mudzimai wekuroora ane makore 28 kusvika 35 ane mwana 1 kana asina. Ngaave ari HIV negative, zvizhinji tozotaura. Andifarira anogona kufona kana kutumira sms pa0718 705 282.
Ndiri murume ane makore 34 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 25-30 ane mwana 1. Vanoda kutamba musanditsvage. Nhare yangu 0716 557 886.
Ndiri murume ane makore 34 ekuberekwa ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 30. Ngaave ari HIV negative uye achishanda kana kuita basa remawoko. Nhare yangu 0718 524 929. *********
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 48 nevana vatatu. Ndinodawo murume ane makore 50 zvichienda mberi. Andifarira ngaandibate pa0717 273 803 asi ndodawo ane rudo asina mukadzi. Zvakawanda ngatitaurei panhare.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 22 kusvika 28. Ndine vana vaviri, anoda ngaandibate pa0713 308 505.
Makadini paTishamwaridzane? Ndiri murume akasvika ari HIV positive ane musha unofadza chose nevana 3. Ndine makore 43, ndinotsvaga mudzimai ane makore 35 kusvika 45 anoda zvemusha, ane hutsanana. Ngaave ane vana 2 vanochengeteka, handiputi fodya kana kunwa doro. Ndakafirwa saka ndave kuda kuroora nekuti kushushikana kwakapera. Fonai pa0716 819 143.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndotsvagawo musikana wekuroora anoda kugara kumusha asiri pachirongwa. Zvizhinji ngatitaure pa0775 899 178. Ndinopinda chechi yemweya.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinodawo musikana ane makore 19-21, ane tsika dzakanaka. Nhare yangu 0779 658 173.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana vatatu ndinodawo murume ane makore 42 kusvika 55. Anondida ngaandibate pa0772 501 010.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28 ekuberekwa uye ndinotsvagawo musikana wekufambidzana naye ane makore 20 kusvika 25. Ndinobatika pa0733 860 658.
Makadii? Ini ndiri mukadzi ane makore 19 nemwana mumwe chete ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore ari pasi pe25. Ngaandibate pa0734 024 410.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 26 ndinotsvagawo murume anoda kuroora ane makore 29 kusvika 36 uye anoshanda. Nhare yangu 0713 844 782.
Ndiri mudzimai ane makore 26 nevana 3, HIV positive uye ndoda murume ane makore anoshanda ari pamushonga asi asingaonekwi. Ndiri mufupi, nhare yangu iyi 0782 464 169.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri murume ane makore 26 okuberekwa ndinotsvagawo mukadzi akanakisa wokugara naye ari pachokwadi. Ndinowanikwa pa0784 325 341.
Makadiiko veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 25 ndoda musikana ari kuda kuroorwa ane makore 18 – 22 achiri mhandara. Nhare yangu 0784 468 525.
Ndiri mukomana ane makore 22 ekuberekwa ndotsvagawo musikana wekufambidzana naye ane makore makore 18 -20 anotya Mwari. Ndinonamata uye ndinoshanda muHarare. Ngave akasununguka kunoongororwa ropa. Nhare 0774 244 346.
Ndiri murume ane makore 43, ndinodawo mukadzi ane mwana kana asina ane makore 25 kusvika 35. Ari HIV negative, ngaandibate pa0716 256 828.
Ndiri mudzimai ane makore 47 nemwana 1, HIV+ uye ndinotsvagawo murume asina mukadzi anoda kuroora. Ndiri chirikadzi, handidi kuparadza dzimba dzevamwe saka ndiri kuti vane vakadzi vavo kwete. Ari HIV positive, asinganwe doro ngaandibate pa0714 856 292. Ndinopinda chechi yePHD Ministries.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinotsvaga musikana akanaka ari pasi pemakore 25. Nhare yangu 0784 543 966.
Makadii? Ndaneta nekunyorera musingandishambadzewo. Ndine makore 23 ndotsvagawo murume akarongeka anoziva Mwari asina utachiona hweHIV, chero zera. Ndine vana 2, nhare yangu 0776 159 895.
Ndiri murume ane makore 28 nevana vatatu ndodawo mudzimai ane makore 20 kusvika 26 ane mwana kana asina akazvipira kuroora uye kunoongororwa ropa. Zvakawanda mondibata pa0717 076 026.
Munofara here? Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana akavimbika wekuroora ane makore 18 uye anoenda kuchechi. Nhare yangu 0782 174 856.
Ndiri mudzimai ane makore 30 nemwana mumwe chete, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 45-50. Andida ngaandibate pa0784 933 829 asi varume vevanhu kwete musafona ndapota.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mukomana ane makore 25 ndotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 21 ava kuda zveimba. Zvakawanda tozotaura, ngaandibate pa0776 664 700.
Vanotamba mirai henyu. Ndinonyorera asi handisati ndamuwana. Ndiri mukomana ane makore 28, ndiri mupfupi uye HIV positive. Ndinotsvaga musikana kana mukadzi ane mwana 1 ane makore 22 kusvika 28. Ngaave anotya Mwari ava kuda zvemba ari pachokwadi, mucross-border kana kuti anoshanda muHurumende. Zvakawanda tinozotaura, ndatenda andifarira anondibata nesms kana kufona pa0772 761 114.
Ndiri murume ane makore 51 ekuberekwa ndinoda mukadzi ari pachokwadi ane makore 41 kusvika 46. Ndiri HIV positive nevana 2 vatova nemisha yavo. Andida ndibatei pa0771 638 985.
Makadii veTishamwaridzane? Ndava nenguva ndefu ndichinyorera shambadzo yangu asi haisi kuverengwa sei? Ndinodawo mukadzi akarongeka anoshanda muHurumende kana asingashande ane makore 30 kusvika 45. Ndiri murimi ane puroti, makore angu i46 uye ndinoda mukadzi asina chirwere. Ndinobatika pa0783 705 227.
Ndiri murume ane makore 31. Ndotsvakawo mukadzi ane makore 25 kusvika 18 ane mwana 1, akanaka, akasimba uye asina chirwere nokuti ini handina. Ndinobatika pa0715 624 359.
Ini ndiri mudzimai ane makore 39 ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 39 kusvika 50. Nhare yangu 0733 713 183.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvaka musikana wekuroora ari pasi pemakore 20 akavimbika, ari HIV negative. Ndinonzi Zivanai, ndinoshanda papurazi reSherwood kuKwekwe. Nhare yangu 0777 574 080.
Ndiri murume ane makore 38 nevana 2, HIV positive asi ndichakasimba hangu. Handishande, ndinoita mabasa emawoko uye ndinoenda kumasowe. Ndinodawo mukadzi ane rudo neni nevana vangu. Andifarira ngatitaure nemasms pa0774 972 620.
Ndiri mudzimai ane makore 34 nevana vaviri, HIV positive uye ndinotsvaga murume anondiroora. Ari pachokwadi ndibate pa0784 017 732.
Makadii veKwayedza? Ndotenda nebasa guru ramunoita. Ndiri mukomana ane makore 29, HIV negative uye ndoshanda kuKwekwe. Ndotsvagawo musikana anoda kuroorwa kubva pamakore 18 kusvika 23 ari HIV negative, anoshanda kana asingashande asi ane mufaro. Andifarira ngaandifonere pa0778 999 170.
Ini ndiri mudzimai ane makore 39 ndinotsvagawo murume ari pachokwadi ane makore 39 kusvika 50. Nhare yangu 0733 713 183.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 32 ndinotsvaga murume ane makore 33 kusvika 40 anoda kurora. Andifarira anondibata pa0784 489 159.